Idle Detection API muChannel 94 yakonzera mafungire ekushoropodza | Kubva kuLinux
Idle Detection API muChannel 94 yakonzera mafungire ekutsoropodza
Darkcrizt | 24/09/2021 22:31 | Noticias
Pakutangwa kweiyo Chrome vhezheni 94 se yakaita kusarudzika kwekuisirwa kwekusaziva kwekuona API, izvo zvakakonzera mafungu ekushoropodzwa nehukama hwekupokana kubva kune vanogadzira Firefox uye WebKit / Safari.
Iyo idle yekuona API inobvumira masayiti kuti aone kana mushandisi asingashande, ndiko kuti, hazvibatanidze nekhibhodi / mbeva kana kushanda pane imwe tarisiro. Iyo API zvakare inokuzivisa iwe kana iyo saver saizi iri kumhanya pane system kana kwete. Inactivity ziviso inoitwa nekutumira ziviso mushure mekusvika kune yakatemerwa kusashanda kweiyo chikumbaridzo, iyo yakaderera kukosha iyo yakaiswa kune 1 miniti.
Izvo zvakakosha kuisa pfungwa pairi kushandisa iyo idle yekuona API inoda kupihwa pachena kwemazita emushandisiNdokunge, kana iko kushanda kuchizama kuona chokwadi chekusaita kwekutanga, mushandisi anozoratidzwa fafitera ine chikumbiro chekupa mvumo kana kuvharidzira mashandiro.
Chat kunyorera, masocial network uye kutaurirana kunodaidzwa kunzi, izvo inogona kuchinja chinzvimbo chemushandisi zvichienderana nekuvapo kwavo pakombuta kana kudzosera kumashure kuratidzwa kwezaziso yemameseji matsva kusvika pakusvika kwemushandisi.
Iyo API inogona zvakare kushandiswa mune mamwe mapurogiramu kuti idzokere kuchiratidziro chepakutanga mushure menguva yakatarwa yekusaita basa, kana kudzima mashandirapamwe, zviitwa-zvinoda mashandiro, sekudhirowa machati akaomarara anogara achigadziriswa kana mushandisi asiri pachiratidziri. kombiyuta.
Chinzvimbo chevaya vanopikisa chinogonesa iyo API kusashanda kwekuona inowira kuchokwadi chekuti ruzivo rwekuti mushandisi ari pakombuta here kana kuti kwete runogona kutarisirwa kunge rwakavanzika. Pamusoro pekushandisa kunobatsira, iyi API inogona zvakare kushandiswa kwete nekuda kwezvakanaka, semuenzaniso, kuyedza kushandisa kusagadzikana apo mushandisi asipo kana kuviga zviito zvinoonekwa zvakashata, senge kuchera.
Uchishandisa API iri mubvunzo, ruzivo nezve maitiro maitiro anogona zvakare kuunganidzwa yemushandisi uye mutinhimira wezuva nezuva webasa ravo. Semuenzaniso, unogona kutsvaga kana mushandisi achiwanzo kuenda kumasikati kana kusiya basa. Muchirevo chechisungo chemvumo yekusimbisa, Google inoona zvinonetsa izvi seisina basa.
Kuti udzivise zvachose iyo idle yekuonekwa API, yakasarudzika sarudzo inopihwa mu "Chakavanzika uye chengetedzo" chikamu chegadziriro ("chrome: // settings / content / idleDetection").
Uyewo, Tinofanira kufunga nezve noti kubva kune vanogadzira Chrome nezve kufambira mberi kwehunyanzvi nyowani yekuona yakachengeteka memory memory. Sekureva kweGoogle, 70% yezvinetso zvekuchengetedza muChrome zvinokonzerwa nekukanganisa ndangariro, sekushandisa mushure mekuwana mahara kune buffer. Matatu maitiro makuru ekugadzirisa zvikanganiso zvakadaro anozivikanwa: kuomesa kuunganidza-nguva cheki, kuvhara zvikanganiso zvenguva yekumhanya, uye kushandisa mutauro unodzivirira ndangariro.
Zvinonzi kuedza kwatanga kuwedzera kugona kugadzira zvinhu mumutauro weRust kune iyo Chromium codebase. Iyo Rust kodhi haisati yasanganisirwa mumisanganiswa yakapihwa vashandisi uye chinangwa chayo chikuru kuyedza mukana wekugadzira zvikamu zvega zvebrowser muRust uye kuzvibatanidza pamwe nezvimwe zvikamu zvakanyorwa muC ++.
Mukufananidza, yeiyo C ++ kodhi, chirongwa ichi chinoramba chichienderera nekushandisa iyo MiraclePtr mhando pachinzvimbo chekunongedzera mbishi kuvharidzira mukana wekushandisa kusagadzikana kunokonzerwa nekuwana mabhureki ekurangarira, uye nzira nyowani dzinotsvagirwa kuti dzione zvikanganiso mudariro. kuumbwa.
Uyewo, Google iri kutanga chiedzo kuyedza zvinobvira saiti saiti mushure mekunge bhurawuza rasvika pane matatu manhamba kwete maviri.
Kunyanya, iyo yekumisikidza "chrome: // mireza # simba-hukuru-vhezheni-kusvika-ku100" yakaonekwa mune yeChannel 96 yeshanduro shanduro, painotsanangurwa mu Mushandisi-Mumiriri musoro, vhezheni 100 (Chrome / 100.0.4650.4. XNUMX) ichave kuratidzwa. Muna Nyamavhuvhu, kuyedza kwakafanana kwakaitwa muFirefox, iyo yakaratidza matambudziko nekubata kwemaviri-manhamba edzimwe nzvimbo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Idle Detection API muChannel 94 yakonzera mafungire ekutsoropodza
Akira: Native yakavhurwa sosi Linux kunyorera kweUI uye UX dhizaini
Google yatopa zuva rekupera kwekuenderana kweshanduro 2 yeChiratidzo cheChiratidzo